के तपाईले कोदोबाट बनेका परिकारहरु खानु भएको छ ? कोदो खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि यति धेरै फाइदाहरु – Annapurna Daily
On Jan 11, 2022 428
एजेन्सी । कोदोलाई धेरैजसो मानिसले राम्रो अन्न मान्दैनन् । तिनीहरू यसको गुणमा होइन कि रंगमा गएकाले त्यस्तो भएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, कोदो तपाईंहामीले सोचेजस्तो कम गुणकारी खाद्यान्न भने हुँदै होइन। यसमा चामल र मकैभन्दा ३५ गुणा अनि गहुँभन्दा ८.७३ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुस, मोटाउन चाहनुहुन्छ ? उसोभए यी खानेकुरा खाने गर्नुहोस्: कतिपय मानिस दुब्लोपनाका कारण चिन्तित हुन सक्छन्। यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन यस्ता खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । गहुँको रोटी: नियमित गहुँको रोटी सेवन गर्दा तौल बढाउन सकिन्छ। गहुँमा अत्यधिक प्रोटिन, फ्याट र भिटामिन बी पाइन्छ। साथै, यसमा क्यालोरी पनि बढी हुने भएकाले तौल बढाउन उपयोगी मानिएको छकतिपय मानिस दुब्लोपनाका कारण चिन्तित हुन सक्छन्। यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन यस्ता खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ ।